Ganacsade caan ahaa oo lagu dilay Baledweyne – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ganacsade caan ahaa oo lagu dilay Baledweyne
A warsame 17 February 2015 17 February 2015
Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka halkaas lagu dilay ganacsade caan ahaa oo deganaa galbeedka magaalada.
Dabley bastooladu ku hubeysan ayaa toogtay Xaaji Cismaan Qoorow oo ganacsade ahaa isla markaana odayaasha dhaqanka ka tirsanaa, waxaana dilay saakay markii u ka soo baxay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Howl-Wadaag.
Guddoomiyaha degmada Beledweyne, Macalin Cismaan Qallaafoow, ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ku daba jiraan kooxdii dilka geysatay, dhawaana ay warbixin siin doonaan warbaahinta.
Ninkan ganacsadaha ahaa ee la dilay ayaa lahaa shirkad dhisme oo qandaraasyo ku qabtay dib u dhiska dhowr xarumood oo ay ku jiraan goobaha adeegga bulshada Baledweyne.
Ganacsade Xaaji Quuraaw ayaa ka mid ahaa dadka sida weyn loogu tixgeliyo magaalada Beledweyne dadaal badana galay sidii nabad uga dhalan lahayd magaalada.
Madaxweyne Xasan oo kasoo laabtay socdaalkii caafimaad ee uu ku tegay Jarmalka
Tanzania oo ka shaki qabta in dalkeeda Alshabaab ka dhashay